FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ANY PIT PEI - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika any Pit Pei
Alika mpiompy mifangaro Shar Pei / American Pit Bull Terrier
'Ity no alikako Psycho. Rehefa nahazo azy izahay dia nilaza izy ireo fa manana an'i Pit Bull sy Shar-pei ao aminy izy. 3 taona izy amin'ity sary ity ary mazoto be. Tiany ny mihazakazaka, milalao ary manenjika tantely. '
Ny Pit Pei dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Sinoa Shar Pei ary ny American Pit Bull Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra eo amin'ny hazofijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ireo karazana ao amin'ny hybrid ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Mpanoratra International Canine Registry®= Pit Pei
'Pugsley no anarako. Mpifangaro Shar-Pei / Pit Bull 3 taona aho izay nahita ny fianakaviako tamin'ny famonjena ahy tamin'izaho 9 taona teo ho eo. Tsy fantatry ny fianakaviako tamin'izany fotoana izany fa anisan'ny Pit Bull aho, saingy taty aoriana dia hitako rehefa raiki-pitia tamiko fa tsy maninona izay karazana alika aho. Ny tena zava-dehibe dia hoe izaho dia marani-tsaina, be fitiavana, tsy mivadika, tsara amin'ny ankizy ary mahafatifaty. Tiako ny milalao miaraka amin'ilay sakaizako alika hafa 'Lacy' izy dia Fandaniana / Pin ary fantany koa hoe iza ny sefony, na izany aza avelako hitsambikina amiko izy ary manantona ny valanorano toa ny gym any anaty ala hilalaovako. Tena tian'ny fianakaviako aho. Navelan'izy ireo hiara-matory amin'izy ireo aho, mandry manodidina ny fandriana ary hitondrany ahy toy ny ampahan'ny fianakaviana. Tiako ny mandeha mitaingina kamio. Milalao amin'ny zavatra mety hatsipinao aho. Milalao manenjika sy mijery-a-boo miaraka amin'ny ray aman-dreniko aho ary indrindra indrindra izaho hiarovana izy ireo 24/7. Miambina foana aho ary hampandre azy ireo rehefa misy mahita ny tranontsika. Tazoniko daholo ny sifotra, chipmunks, vorona ary varmints hafa avy amin'ny tokotaninay. Afa-tsy izany hawk io andro io dia tonga teo amin'ny tokotaninay. Nasehony ahy fa tsy izaho irery no boss any ivelany, fa tsy maninona izy fa tsy tonga matetika. Soa ihany aho fa nahazo ny fianakaviana nataoko, tsy misy azy ireo aho alika zanako dia iharan'ny fanararaotana / diso fampiasa / na avela ao amin'ny fialofana. Tonga eto aho hanaporofoana fa amin'ny fitiavana sy andraikitra adala, dia afaka ny ho malala aho biby fiompy ao amin'ny fianakaviana . '
Colby the Pit Bull / Shar Pei mifangaro amin'ny 7 taona
saint bernard alemanina mpiandry ondry mifangaro alika kely
sarin'ny alika omby aostraliana
husky fotsy sy fotsy siberianina
yorkie sy dachshund afangaro alika kely
St Bernard sy poodle mifangaro
sarin'i shar pei pitbull mix